Ukutya kolusu: okona kutya kulungileyo | Amadoda aQinisekileyo
UMiguel Serrano | | Ihlaziywe 29/11/2019 11:27 | Kufanelekile, ZeMpilo
Ngaba ukutya kwakho kunokutya okwaneleyo kwesikhumba? Into oyityayo inganceda ukugcina ulusu lwakho lusempilweni ngaphakathi kwaye luyenze ukuba ibonakale inomtsalane ngaphandle..
Ukuba ufuna ulusu olusempilweni, olukhuselweyo nolondleke kakuhle, ezi zilandelayo zezi okona kutya kulungileyo kwesikhumba unokukufumana kwivenkile enkulu.
3.1 I-antioxidants yendalo yokutya kwakho
7 Ioli yomnquma
8 Itiye elihlaza
Amanzi okusela ngumba ophambili kwimpilo yolusu, ke qiniseka ukuba ufumana amanzi awaneleyo yonke imihla. I-H2O inceda ulusu ukugcina amanqanaba afanelekileyo okufuma, into ekufuneka uyikhathalele imibimbi kunye nemigca elungileyo, kuya kufuneka uyithathele ingqalelo. Ngale ndlela, ukusebenzisa isithambisi (kungcono ukuba sikhusela i-sunscreen) ikwangumkhwa obaluleke kakhulu.
Amanzi awangezeli ukufuma kulusu lwakho, nawo iyanceda ukuyondla, ukuyicoca ityhefu kunye nokugcina igazi lihamba ngendlela esempilweni. Ngenxa yoko, amanzi lolunye lolwalamano olukhulu kulusu. Ungafumana amanzi ngendlela elula (ngokuthatha iglasi yamanzi elungileyo), kunye nokutya okuneentlobo ngeentlobo, okona kunika umdla sisiqhamo nemifuno ngenxa yenani eliphezulu leevithamini kunye neeminerali ezifaka igalelo emzimbeni.
Amakhowa ane-selenium, ityuwa ekhusela umzimba wakho kwii-radicals zasimahlaezinokubangela nantoni na ukusuka kumbimbi kunye nolusu olomileyo ukuya kulusu lwethishu kunye nomhlaza wolusu. Ukuba awuyondawo yamakhowa, ungayifumana le minerali ngokutya okuninzi. Ipasta yengqolowa iphela, amandongomane eBrazil, iiproni, iioysters, kunye nentlanzi ezinje ngecod, halibut, ityhuna, isalmon, kunye nesardadi nayo ine-selenium.
I-Antioxidants ayinakusilela nakuphi na ukutya okuthathwa njengokusempilweni, njengoko kubalulekile kwimicimbi emininzi yempilo, kubandakanya imeko yolusu. Umonakalo omkhulu wasimahla kulusu une-antidote: iitumato kunye nee-antioxidants zayo. Ukuqinisekisa ukutya okunotye kakhulu kwii-antioxidants, ukutya okufana neeblueberries, iirasibheri, amaqunube amnyama, iiapilkosi, ii-beet, isipinatshi, iitapile, iitangerines kunye nepepile akufuneki zisilele ekutyeni kwakho. Ngokubanzi, yonke imifuno enemibala kunye neziqhamo zilungile kulusu.
I-antioxidants yendalo yokutya kwakho
Jonga eli nqaku: I-antioxidants yendalo. Apho uyakufumana yonke into malunga ne-antioxidants, ukusuka kwimisebenzi abayenzayo ukuya ekutyeni okubabonelela ngexabiso elikhulu.
Ngaba uvile ngecoenzyme Q10? Ukuba awukwenzi oko, uya kuba nomdla wokwazi ukuba yeyona nto iphambili kwimisebenzi emininzi yomzimba. Okwangoku kwi-tuna, enye yeendima ze-coenzyme Q10 emzimbeni ngokuchanekileyo kukugcina ulusu lukwimeko entle. Umzimba uyenza ngokwendalo, kodwa njengoko iminyaka ihamba, imveliso iyancipha. Ngethamsanqa unokuyifumana le antioxidant, edityaniswe nokulwa neempawu zokuguga, ngokutya okufana netyhuna, iinkukhu kunye neenkozo ezipheleleyo.
Iminqathe yenye yezona zinto zithandwa kakhulu kulusu lokutya. Izibonelelo zayo zivela ngokuyinxalenye kumxholo wevithamini A, ethintela ulusu olomileyo, amabala kunye nemibimbi. Kuyathakazelisa ukulwa amabala kunye nezinye iingxaki zolusu. Okunye ukutya okulayishwe ngevithamini A enolusu kubandakanya i-cantaloupe, amaqanda, imifuno enamagqabi kunye nobisi olunamafutha asezantsi.
I-Kiwi ikhusela ulusu lwakho kumonakalo obangelwa yimitha yelanga kwi-collagen kunye ne-elastin, phakathi kwezinye izinto ezinceda ulusu ukuba luhlale luqinile. Imfihlelo ilele kwi Vitamin CIpepile ebomvu, ipapaya, ibroccoli, ihlumelo laseBrussels kunye nazo zonke iziqhamo zesitrasi ngokubanzi zikwindlela elungileyo yokuqinisekisa idosi esempilweni ye-vitamin C.
Ukonakala kwelanga yenye yeentshaba ezinkulu zolusu, kwaye ivithamin C ayisosicwangciso sodwa onokuthi usithathe ukulwa naso. Ioyile yomnquma inamafutha asempilweni, athambisayo ahlaziye ulusu. I-Flaxseed, i-walnuts, i-salmon, kunye ne-sardines nayo inefuthe elifanayo kulusu lwakho.
I-oyile ye-Olive ikwabonelela nge-vitamin E, i-antioxidant ethi, njenge vithamin C, ikhusele ulusu kwimitha yelanga. Ioyile yemifuno ingumthombo olungileyo, kodwa uya kufumana idosi kulusu lwakho ukuba ubandakanya amandongomane, imbewu, iasparagus, kunye nemifuno enamagqabi ekudleni kwakho.
Xa kufikwa ekutyeni kwesikhumba, enye yezona zinto zingqinwe yiti eluhlaza. Uphando lubonakalisile ukuba luyanceda ukujongana nosongelo oluninzi, kubandakanya ukudumba kunye nokonakaliswa lilanga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » Ukutya kwesikhumba
Ungayisebenzisa njani i-depilatory cream
I-5 yemfundo yezemidlalo yamabanga aphakamileyo imidlalo kunye nemisebenzi